Nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa na-ekpuchi ihu igwe
Nkọwa:Okwute ikpo ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ,Ejiri nkuzi na-eme ihe,Ekpuchi ikpuchi Silicone Steering
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa na-ekpuchi ihu igwe
Ihe Nlereanya.: SWC2302
Ihe mkpuchi windo Silicone aha ya bụ Lichee nke a na-eme 100% nri mkpụrụ edo. Ụlọ ọrụ anyị na-eji silik kachasị mma iji mepụta mkpuchi ụkwụ uhie silicone . H eated silicone n'iru wheel cover ike ga-eji nke fọrọ nke nta ụgbọala. F ashion n'iru wheel cover ọtụtụ ndị ahịa na-enwe mmasị, n'ihi na ọ bụ atụmatụ ejiji maka peopel na-eji. Ihe mkpuchi uhie uhie uhie na- eme ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Igwe mkpuchi uhie ụkwụ na-acha ezigbo mma, nke dị n'ime ya dị mma, ya mere ọ ga-aka mma maka ichebe ụgbọelu ụgbọ ala. ma ọ dị nro, ọ dị nnọọ mma maka iji.
Agba nwere agba nkịtị, nwekwara ike inye Pantone agba. Na n'afọ 2018, anyị mepụtara ụfọdụ àgwà dị mma maka mkpuchi uhie ụkwụ nke silicone , nke nwere ezigbo mmapụta na mkpuchi nkedo. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, anyị nwere ike imere gị.
Banyere ihe mkpuchi uhie uhie nhazi, anyị abụrụla ụzọ nkwụnye 2, otu bụ akpa ọkpụkpụ, nke ọzọ bụ igbe dị nro.
Igwe mkpuchi ọkụ na-ekpo ọkụ dị ọkụ 38 cm Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-emepụta ihe na-emepụta ígwè na-acha odo odo na-acha odo odo Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Uhie Okpukpu Ugbo Ala nke Silicone Kpọtụrụ ugbu a
Omenala emepụta Silicone Rubber Steering Wheel Cover Aka-mee Kpọtụrụ ugbu a
Plastic plastic cover maka steering wheel walmart Kpọtụrụ ugbu a
Enweghị mgbu ọnya gị nkedo ụgbọelu na-ekpuchi akpaaka Kpọtụrụ ugbu a
Okwute ikpo ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ Ejiri nkuzi na-eme ihe Ekpuchi ikpuchi Silicone Steering Igwe mkpuchi kpụ ọkụ n'ọnụ Eji mkpuchi mkpuchi kpụ ọkụ n'ọnụ Okwute uhie ọhụụ ọhụrụ Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Kpeepe mkpuchi kpụ ọkụ n'ọnụ kacha mma